Discussion in 88 33rd Anniversary – PVTV Myanmar
·6months ago ·30 Comments
PVTV ၏ ၈လေးလုံး နှစ်ပတ်လည် အထူးကဏ္ဍ
2021-08-08 at 10:57 AM
Kyawswar Thintswe says:
2021-08-08 at 11:04 AM
2021-08-08 at 11:06 AM
2021-08-08 at 11:12 AM
HtAK Kyaw says:
2021-08-08 at 11:28 AM
မပြီးဆုံးသေးတဲ့ရှစ်လေးလုံ: လူထုလွတ်မြောက်ရေ: ဒို့အတူရုန်း။
2021-08-08 at 11:30 AM
I never think we are going backwards but we are because the foolish group of coup leaders maliciously destroyed the country.
2021-08-08 at 11:33 AM
Aung Chan Myint says:
2021-08-08 at 11:38 AM
၈၈ ကို မ​နေ့ကလိုဘဲ ​အောင်း​မေ့တယ် ၊ဘယ်​တော့မှ မ​မေ့ဘူး ၊​နောင်လဲ ​မေ့မှာမဟုတ်ဖူး–
2021-08-08 at 12:01 PM
အရေးတော်ပုံအမြန်ဆုံးအောင်မြင်ပြီး စနစ်ဆိုးကို အမြတ်ပြတ်ချေမှုန်းရှင်းလင်းနိုင်ကြပါရစေ
2021-08-08 at 12:05 PM
ကိုကိုလတ် ဗမာ says:
2021-08-08 at 12:10 PM
2021-08-08 at 12:16 PM
ဘယ်တောမမှမမွေ ၈၈ ၁၉၈၈ခုနဧ် မမေ့ဘူး အသ်တွေဘဝတွေခုနဧ်တွေရက်တွေမေ့မရဘဝတွေရည်းမှန်းချက် အနာဂါတ် မျောာ်လင်ချက် လူတိုင်းမှာမွေးကတည်းအသိညဏ်ရှိကတည်းက မျော်လင်ချက် ရည်းမှနးချက်အနာဂါတ် လူတိုင်းမှာရှိတယ် ဖြူစင်တယ် ရိုးသားတယ် နာကျည်းတယ် ရွံ့တယ် မုန်းတယ် ဒါပေမယ် တစ်မြေထဲနေရေမြေတောတောင်ဟာအာဏာရှင်လားသဘာဝလား ငါပိုင်တာဘာရှိလည်းဘာမှာမရှိဘာမှာမပိုင် အခိုးအငွေ့ သချိုင်းကအကုန်သွားရမှာမသေဘူးဆိုတာရှိလား မမြဲခြင်းတရားရှိနေသမျှ သဘာဝ ငါကိုဘာမှလာမပြောနဲ့ အကုန်သိ မင်အသက်မင်းဘဝ မင်းဘဝ မလုပ်ကောင်းတာမလုပ်တာရှက်တက်တာ မသေခင်ဘဝကခဏလေးပါ အေးချမ်းသာယာပျော်ရွင်ဘဝကိုလူတိုင်းသက်ရှိတိုင်းကဖြတ်ကျော်ပျံသန်းကူးခတ်ခုန်ကျော် အာဏာရှင် အာဏာရူးအုပ်စု စစ်တပ် က တပ်မတော်က ဘာလည်း ဘယ်လည်း လူသားဆန်မယ် အရေးတော််ပုံအောင်ရမည် နိင်နေသည် အောင်နေပြီး
2021-08-08 at 12:36 PM
2021-08-08 at 12:38 PM
2021-08-08 at 12:50 PM
၈၈ကအကြွေး ၂၁မှာ အပြီးသတ်မယ်
2021-08-08 at 1:18 PM
2021-08-08 at 1:20 PM
အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လူထုခေါင်းဆောင် နံပါတ်တစ်ဆိုရင် ကိုမင်းကိုနိုင်ဟာ လူထုခေါင်းဆောင်နံပါတ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။
Naw K says:
2021-08-08 at 2:27 PM
Let's Save Myanmar. Pray for nation.
Myanan Darkaung says:
2021-08-08 at 2:36 PM
နိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ် နိုင်ကိုနိုင်ရမယ် စိုးရိမ်စိတ်ပေါ်ရင် အစ်ကိုတို့ ဆရာဇော်ဝေစိုးတို့ ရဲ့ ရှင်းလင်းတင်ပြဦးဆောင်မှု ပြောကြားမှုများ ကြောင့် အားတက်ရပါတယ် ကျေးဇူးပါ ရှင့်။
2021-08-08 at 4:50 PM
2021-08-08 at 7:37 PM
May all military dogs burn in hell.
2021-08-08 at 8:40 PM
2021-08-08 at 11:09 PM
ohnmar kyaw111 says:
2021-08-10 at 10:39 AM
2021-08-25 at 7:45 PM
ကိုမင်းကိုနိုင် စိတ်ချမ်းသာလို့ ကိုယ်ကျမ်းမာပါစေဗျာ….ကျေးဇူးရှင်သူရဲကောင်းကြီး ထာဝရအလေးပြုကျေးဇူးတင်ပါတယ်….